Yenza iinguqulelo zevidiyo ngeNkulumbuso ngokulula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenza iinguqulelo zevidiyo ngeNkulumbuso ngokulula
Yenza iinguqulelo zevidiyo ngeNkulumbuso kulula ukuba udlale ngenxa yomntwana Uncedo olukhulu olunikezwe ngumdibaniso we INkulumbuso apho inye kuphela konqakrazo Sele sikwazile ukufaka inguqulelo yobungcali ngesiphelo esicocekileyo. zikhona iintlobo ezahlukeneyo zotshintshoNganye yazo isetyenziselwa injongo eyahlukileyo ngokuxhomekeke kwiimfuno zeprojekthi nganye. Siza kufunda ukufumanisa zivela phi iinguqu INkulumbuso kwaye siya kufaka enye ye ukuphela kwesiphumo kwividiyo yethu ukufumana iziphumo kwisitayile sokwenene se-cinema.
Kwilizwe lemiboniso bhanyabhanya kunye nababukeli Utshintsho ngokugqwesa kulawula: fade utshintsho, okwenziwa lolu tshintsho kukudibana nemvelaphi ngohlobo lwethambeka, ngaloo ndlela ufezekisa umzekelo isihloko somdlalo bhanyabhanya siyanyamalala kancinci kancinci njengoko iqala.
En INkulumbuso ukusebenzisa utshintsho kulula kakhulu, into ekufuneka siyenzile yile Tsala utshintsho kwividiyo kwaye uqwalasele ukhetho lwakho. Kule meko siza kuthi yenza utshintsho olungenasiphelo, kwi-Premiere ibizwa ngokuba: yiba mhlophe okanye uhambe mnyama. Zombini iinguqu zifezekisa ngokufanayo, yehlisa i-opacity kwaye vumela imvelaphi ibonakale.
Into yokuqala esiza kuyenza kukuba yenza imvelaphi, ingayi umbala okanye ividiyo ifakwe njengemvelaphi. Siza kuba nakho ukusebenzisa isiphumo kokubini ngokuchwetheza kunye nevidiyo, ukuba sifuna iprojekthi yethu yokumamela ukuba iqale ngevidiyo ethi inyamalale ngokuthe ngcembe kwaye masibone enye ividiyo emva kwayo, sinokusebenzisa umphumo ofanayo. Kuba yenza imvelaphi Kufuneka nje siye tab umbala omtsha / we-matte.
Emva kokuba silungile ingxowa-mali, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuba yenza isihloko sombhalo ukusebenzisa kamva ukuphela kwesiphumo. Kuba yenza isicatshulwa kufuneka siye kwithebhu isihloko esingagqibekanga / isihloko esitsha / umfanekiso osekhona. Into elandelayo ekufuneka siyenzile kukutsala isicatshulwa sethu kumda wexesha ukuze sisebenzise utshintsho kulo.
INkulumbuso inekhathalogu yotshintsho lwevidiyo, ukufikelela kule khathalogu kufuneka kuphela fumana iziphumo zevidiyo / ithebhu yenguqu. Kule meko siza kusebenzisa inguqu ukusuka ekumnyama. Ngokuba faka utshintsho Kuya kufuneka uyihudule kwimenyu yotshintsho uye kwividiyo apho sifuna ukuyifaka khona, xa sele sifakiwe sinokucofa kuyo kumda wexesha kwaye singene kwimenyu yokutshintsha useto olungagqibekanga.
ukuba fumana isiphumo esihle sotshintsho konke ekufuneka sikwenzile kukuba Bala ixesha elifanelekileyo kakuhle inguqu ukuyenza igudile kangangoko. Ukuba into esiyifunayo kukuyisebenzisa kwisicatshulwa, kuyinto eqhelekileyo ukuba eso sibhalo sifundwe kakuhle ubuncinci kabini ngaphambi kokuba sinyamalale ngotshintsho. Icebo kukufaka isicelo kwaye ujonge ukungami.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Yenza iinguqulelo zevidiyo ngeNkulumbuso ngokulula
Amaphepha angama-29 amahle okufumana iivenkile zasimahla